PUBG Mobile အတွက်ဟယ်လိုဝိန်း - စပိန်ဘာသာဖြင့်အပြောင်းအလဲ ၁၀၀ စာရင်း Androidsis
Halloween အတွက် PUBG Mobile သို့ပြောင်းလဲမှုအသစ်များနှင့်အသစ် ၁၀၀+
ကျနော်တို့စမ်းသပ်နေပါတယ် PUBG မိုဘိုင်း beta အသစ်ပြောင်းလဲမှု ၁၀၀ ပါ ၀ င်ပြီးတိုးတက်လာလိမ့်မည် Tencent Games မှပေးသောဂိမ်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံများကိုရရှိစေလိမ့်မည်။ Halloween မတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖြန့်ချိမည့် version 0.9.0 ။ ဆိုလိုသည်မှာများစွာသောသူတို့သည်စောင့်မျှော်ခဲ့ရသောထိုနေ့နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများရှိလိမ့်မည်။
အပြောင်းအလဲအသစ် (၁၀၀) နှင့် PUBG Mobile ၏သတင်းများ Erangel မြေပုံအတွက်ညဘက်စနစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ ဒီဂိမ်းကနေတစ်ဆင့်ညနေခင်းမှညဥ့်နက်သွားစေမယ့်အံ့သြစရာတစ်ခုပါ။ အဆင့်မြှင့်တင်မှု၏အခြားအရေးကြီးသောအချက်များမှာ Team Challenges၊ ဘာသာစကားတူသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဂိမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မြေပြင်ပေါ်ကျခြင်းကဲ့သို့အချို့သောကာတွန်းကားများတိုးတက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
1 ရာသီဥတုအသစ်၊ မြေပုံတိုးတက်မှုနှင့်ဟယ်လိုဝင်းသက်ရောက်မှုများ
5 PUBG Mobile version 0.9.0 ၏စာရင်းအပြည့်အစုံ
5.1 ရာသီဥတု, မြေပုံနှင့်ဟယ်လိုဝင်း
5.4 ကြည့်ရှုသူ mode
5.6 In- ဂိမ်းဝယ်ယူမှု
5.12 projectile တိုးတက်မှု
PUBG Mobile တွင်ဟယ်လိုဝင်းညသည်သင်ဂိမ်းကိုစတင်သောအခါတွင်အံ့သြစရာများစွာရှိသည်။ တစ်ခု သန်း 100 ကျော်တပ်ဆင်။ ကြိုဆိုမျက်နှာပြင် သူတို့အားဖရုံသီးနှင့်အတူကြောက်စရာဖြစ်လိမ့်မည် ထိုညတွင်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုထည့်ပေးမည့်ညဥ့်နက်လေထု။
ဟယ်လိုဝိန်းညရဲ့အပြောင်းအလဲတွေထဲမှာငါတို့ပထမဆုံးထွက်လာတဲ့ကျွန်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ် ဒါကြောင့်ထိုညဉ့်အဘို့အလှဆင်ရပါလိမ့်မယ် အထူး။ တောင်မှ ကျနော်တို့ဖရုံသီးကိုသုံးနိုင်သည်AKM သည်ပုန်းအောင်းနေသောအသွင်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်သို့မဟုတ်လက်ပစ်ဗုံးပေါက်ကွဲသည့်အခါစကားပြောသောပါးစပ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ် PUBG Mobile 0.8.0 ဗားရှင်းတွင်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်နက်အသစ်တစ်ခု၏အသွင်အပြင်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ Tencent ဂိမ်းများလာသောအခါယခုဖြစ်သည် 5.56 ရိုက်သော QBU DMR ကိုစတင်မည် ၎င်းကို Mini14 ကိုအစားထိုး Sanhok မြေပုံသစ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
၎င်းကိုထည့်သွင်းထားသည် ပစ်ကပ်အသစ်Sanhok မှာတွေ့မယ်။ ယာဉ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာအချို့သောယာဉ်များတွင်ကစားမည့်သို့မဟုတ်ကားမောင်းသူနှင့်ခရီးသည်တို့၏အမြင်များကိုတိုးတက်စေသည့်ကျပန်းဂီတဖြစ်သည်။ လက်နက်များနှင့်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ဆောင်းပါး၏အဆုံးကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းသည်။
PUBG Mobile သည်အကောင်းဆုံးသတင်းဖြစ်သည် အသစ်ကဘေးကနေ mode ကို၏အသွင်အပြင်။ သငျသညျဖကျြဆီးသောအခါ, သင်နောက်ဆုံးရန်သူဖျက်သိမ်းသည်အထိရန်သူကစားသမားများသူတို့၏ဂိမ်းများကိုပြီးအောင်ကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းရပါလိမ့်မယ်။
ဒီဂိမ်းဟာကျွန်တော်တို့အနိုင်ရတော့မယ့်ပွဲမှာဘယ်လိုအဆုံးသတ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုပေးမယ့်အသစ်သောအသစ်အဆန်းတစ်ခုပါ ဖယ်ရှားပစ်ရန်အနည်းငယ်ရန်သူများကိုပျောက်ဆုံး။ ထို့အပြင်နှင့်ဆက်စပ်, ယခု, အခန်း mode ကိုကနေ spectator mode ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, ကစားသမား projectile ဘယ်နေရာတွေမှာကိုသက်ဝင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
Tencent Games တွင်အဆင့်သုံးဆင့်ပါ ၀ င်မည့်အဖွဲ့လိုက်စိန်ခေါ်မှုများပါဝင်သည်။ အရည်အချင်း, အုပ်စုများနှင့်နောက်ဆုံး။ အဖွဲ့များသည်အုပ်စုအဆင့်နှင့်ဖိုင်နယ်လ်ပွဲများသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါဆုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အနိုင်ရသူများကိုအမြတ်အစွန်းကြီးမားစွာဖြင့်ဆုချလိမ့်မည်။
El စိန်ခေါ်မှုကလည်းငွေကြေးအသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ပေးသည် ထို့အပြင်ထူးခြားသည့်အချက်အနေဖြင့်အသင်းများကိုကစားသမား (၆) ဦး သာကန့်သတ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ကစားသမား ၆ ယောက်အောက်သာရှိသည့်အသင်းများသာလျှင်အသင်းများအများဆုံးကစားနိုင်ပြီး ၆ သင်းသာပါဝင်နိုင်သည်။
PUBG Mobile version 0.9.0 ၏စာရင်းအပြည့်အစုံ
ဗားရှင်းအသစ်၏နောက်ထပ်အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ၎င်းဖြစ်သည် စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ခဲ့သည်။ အခုကျွန်တော်တို့ဝေးကွာနေသောကစားသမားများနှင့်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့်အချိန်တွင်ယခုအချိန်သည်နောက်ကျကျန်နေတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုရည်ညွှန်းသော်လည်း၎င်းသည်သတ်ရန်လွယ်ကူလိမ့်မည် ၎င်းအတွက် PUBG မိုဘိုင်းလမ်းညွှန်သို့သွားပါ.
Night Mode အသစ်ကို Erangel တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းသည် Classic Mode တွင်နေ့နှင့်ညအကြားကျပန်းဖြစ်လိမ့်မည်။
အချို့ဒေသများတွင်အဆောက်အ ဦး အသစ်များထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်ပုံရိပ်တစ်ခုကိုချိန်ညှိချက်များတွင်ထည့်ပြီးဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်လိုက်သည့်အခါ၊ စတိုင်သည်မြေပုံများအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
AKM scarecrow ထွက်လာလိမ့်မယ်။
una လက်ပစ်ဗုံးသည်စကားပြောမျက်နှာပေါ်လာသည် ပေါက်ကွဲ
ဟယ်လိုဝင်းပွဲတွင် Night Mode ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားရန်အခွင့်အလမ်း ၅၀% ရှိသည်။
အဆိုပါ QBU DMR ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်: ၅.၅၆ မီလီမီတာကျည်ဆန်များကိုအသုံးပြုပြီး Sanhok တွင်သာတွေ့ရသည် (Mini5.56 ကိုအစားထိုး) ။
အဆိုပါ Rony ပစ်ကပ်ထရပ်ကားကဆက်ပြောသည်။ Sanhok တွင်သာရနိုင်သည်။
ထည့်ပါ ယာဉ်များအတွင်းရှိကျပန်းရေဒီယိုဂီတ။ ဒါဟာယာဉ် setting ကိုမှပိတ်ထားနိုင်ပါသည်။
UAZ နှင့် Buggy တို့၏အသံသက်ရောက်မှုများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ထားသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရှုထောင့်၌ယာဉ်မောင်းနှင့်ခရီးသည်အမြင်များကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
El AKM ၏ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်မကောင်းသောအကြံအစည်များလျော့နည်းသွားသည်.
အဲဒီလောက် .... ရှိပြီ တိုးတက်လာသောမကောင်းသောအကြံအစည်ကာတွန်း ပိုပြီးလက်တွေ့ကျအောင်ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ။
QBZ နှင့် QBU တို့မှာ coupler model အသစ်များရှိသည်။
La အချို့သောလက်နက်များကာတွန်းတင် ပထမနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်နှစ် ဦး စလုံး၏အမြင်များတိုးတက်လာခဲ့သည်။
UMP9, Vector နှင့် SLR တို့တွင် 4x အတွက်မျက်မှန်ဖန်သားပြင်အသစ်များရှိသည်။
မော်တော်ယာဉ် mode ကို 1 နှင့်2အတွက်ဘရိတ်ခလုတ်ကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
El Dacia အသံအကျိုးသက်ရောက်မှု PC ပေါ်ရှိ PUBG ကဲ့သို့တူညီသောအသံဖြင့်ချိန်ညှိထားသည်။
စနစ်ရှာတွေ့မည့်နေရာတွင်ရွေးစရာတစ်ခုထပ်ထည့်ထားသည် ပထမ ဦး ဆုံးတူညီသောဘာသာစကားပြောသောအသင်းဖော်.
အောင်သွယ်မှုတိုးတက်လာသည် ဂိမ်းတစ်ခုရှာဖွေခြင်းသည်ယခုအခါပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးကစားသမားများအနေဖြင့်သင့်လျော်သောအဆင့်များသို့အလွယ်တကူရောက်ရှိသင့်သည်။ ခန့်မှန်းရသောအချိန်ယခုစျေးနှုန်းများပိုမိုဖြစ်သင့်သည်။
ကစားသမားများယခုနိုင်ပါတယ် ဆန့်ကျင်ကစားသမားများ၏ဂိမ်းများကိုကြည့်ပါ အသတ်ခံရပြီးနောက်ဂိမ်း၏အဆုံးအထိပါပဲ။
အခန်းမြင်ကွင်းတွင်ကြည့်ရှုသည့်အခါကစားသမားများသည် projectile နှင့်ကျည်ဆံလမ်းကြောင်းများကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေနိုင်သည်။
အဖြေ ပြproblemsနာများ ကစားသမားများသည်အဝေးမှအခြားသူများနှင့်တွေ့သောအခါသို့မဟုတ်သူတို့ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပြောင်းလဲရန်စာရင်းဖွင့်သောအခါ။
မတူညီသောဖိုင်များကိုမြေပုံမွမ်းမံသောအခါမှသာဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အကယ်၍ ဂိမ်း client ကို version 0.9.0 သို့အဆင့်မြှင့်ပါက၊ အချက်အလက် 13MB သာလိုအပ်သည် Miramar အတွက် (သူတို့က 300MB မတိုင်မီ) ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
“ Share for bargains” အင်္ဂါရပ်ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသည်။ ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုအတွက်သင်ညှိနှိုင်းရန်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုအကူအညီတောင်းပါ။ သိသိသာသာလျှော့စျေးသို့မဟုတ်ပြန်အမ်းငွေပင်ရနိုင်သည်။
gana အဆိုပါဟယ်လို Lucky Draw အတွက်သကြားလုံး သင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်များအတွက်သီးသန့်ချောခံယူရန်။
စိတ်တိုင်းကျအဝတ်အစားယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ ကစားသမားများသည် ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီသူတို့၏အဝတ်အစားနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်အရောင်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ကစားသမားအတွက်ထူးခြားတဲ့မော်ဒယ်ကိုယူပါ။ ဒီအင်္ဂါရပ်အသင်းပြိုင်ပွဲများတွင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
မစ်ရှင်စာမျက်နှာရှိ Royale Pass ၏အချို့သောအရာများကိုဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ လက်ရှိရာသီသုံး။ ယခုအပတ်စဉ်မစ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်များစုဆောင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။
ထည့်ပါ Royale Pass မစ်ရှင်များအတွက်အကြောင်းကြားစာ ရလဒ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
မော်ကွန်းပစ္စည်းများရယူသောအခါ "share" အစွန်အဖျားကိုပြတော့မည်မဟုတ်။ မျှဝေသည့်စာမျက်နှာကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
လက်ဆောင် function ကိုများအတွက်အနုပညာဒီဇိုင်းအသစ်။
အ ခေါင်းဆောင်များသည်သူတို့၏အဖွဲ့များကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်လိမ့်မည် Team Challenge ပြိုင်ပွဲအတွက်။ အဆင့်သုံးဆင့်ရှိပါသည်။ အရည်အချင်း၊ အုပ်စုများနှင့်ဗိုလ်လုပွဲ။ အုပ်စုများနှင့်နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ဝင်ပြီးသည်နှင့်အဖွဲ့များသည်ဆုများရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဆုရသူများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလက်ဆောင်များရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ထည့်သည် ငွေကြေးအသစ်- The Coin Challenge (Team Challenge ပွဲအဆုံးသတ်တိုင်းကစားသမားများသည် Challenge Coins များကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်) ။ ၎င်းကို Team Challenge ဆိုင်တွင် အသုံးပြု၍ စိန်ခေါ်မှုများအတွက်လဲလှယ်ပါ။
အဆိုပါအသင်းများကိုယခုဖြစ်ကြသည်6ကစားသမားကန့်သတ်။ ကစားသမား ၆ ယောက်ထက်နည်းသောအသင်းများသာပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်နိုင်သည်။ အသင်းသစ်များတွင်အများဆုံးကစားသမား (၆) ယောက်ရှိသည်။ ကစားသမား ၆ ယောက်ထက်ပိုသောယခင်အသင်းများမှာဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သော်လည်းကစားသမားများထပ်မံစုဆောင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ထည့်ပြီးပါပြီ အခန်းထဲမှာအဆင့်မြင့်အခန်း setting များ။ အဆင့်မြင့်အခန်းကဒ်များသည်ပိုင်ရှင်များကိုလက်နက်များ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်စက်ဝိုင်းပိတ်မှုမြန်ဆန်စေရန်ပြုလုပ်ပေးသည်။ဒီနေရာတွင်နောက်ဆုံးရရန်အကြံဥာဏ်အချို့ကိုသင်သိနိုင်သည်) နှင့်အခြား parameters တွေကို။
Miramar နှင့် Sanhok ၏လူတစ် ဦး ၏ရှုထောင့်ကိုအခန်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ PUBG မိုဘိုင်းမြေပုံအသစ်.
ခန်းမများနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကွင်းများသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုအဓိကမျက်နှာပြင်သို့ရွှေ့ပြောင်းလိုက်သည်။
ထည့်ပါ « likes »ကိုကြည့်ရှုရန် function သူငယ်ချင်းများစာမျက်နှာပေါ်မှလတ်တလော
ထည့်သည် « I like you »အဆင့်သတ်မှတ်ချက်.
ထည့်သည် နွယ်စုအမည်ပြောင်းလဲမှုကဒ် ဆိုင်ထဲမှာ။ ၎င်းသည်မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်မှသာဝယ်ယူနိုင်သည်။
မျက်လုံးတစ်လုံးအတွက်မျက်လုံး - တူညီတဲ့ဂိမ်းထဲမှာမင်းကိုကြိုတင်ထိုးနှက်ခဲ့တဲ့ရန်သူတစ်ယောက်ကိုသတ်ပစ်ပါ။
"ငါနှင့်အတူယူပါ" ရန်သူများကမောင်းနှင်နေသောယာဉ်ကိုစီးပါ တစ်စက္ကန့်ထက်ပို 10 စက္ကန့်။
"Fitness Trainer" - အကြိမ် ၁၀၀၀၀ ထိုင်ပြီးအကြိမ် ၁၀၀၀၀ ခုန်ပြီးအကြိမ် ၁၀၀၀၀ ခုန်။
ကြက်သားဝါရင့်: စုစုပေါင်း 500/1000/2000/5000 Team Challenge Coins ကိုရယူပါ။
ရာသီအလိုက်စစ်သား - ၁၀/၂၀/၃၀/၄၀ အဖွဲ့စိန်ခေါ်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ပါ။
Haggling Master - သူငယ်ချင်းများစုစုပေါင်း 1000 / 10000 / 30000 / 1000000UC အတွက်ညှိနှိုင်းရန်ကူညီပေးပါ
သကြားလုံးဆရာ:6သည်အခြားကစားသမား hit သကြားလုံးဘောလုံးသို့မဟုတ်ဗုံးနှင့်အတူ။
အသင်းတစ်ဖွဲ့တွင်ကစားသမားတစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသော client သည်ကွဲပြားသောဗားရှင်းများရှိပါကစနစ်သည်ကစားသမား၏သက်တမ်းအရင့်ဆုံးကိုကြေငြာလိမ့်မည်။
ထည့်သည် host language ကို filter လုပ်ရန် option အဖွဲ့ရုပ်သံလိုင်းပေါ်မှာ။ တူညီသောဘာသာစကားရွေးပါကကစားသမားများသည်တူညီသောဘာသာစကားပြောသောသူများထံမှဖိတ်ကြားစာကိုသာတွေ့လိမ့်မည်။
အလှည့်လုပ်ဆောင်ချက်၏ထောင့်နှင့် ဦး တည်ချက်ညှိ ကြည့်ဖို့ ဦး ခေါင်း။
ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး အခြို့သောအမြင့်မှကျသောအခါတစ် ဦး ကိုချိန်ခွင်လျှာလုပ်ဆောင်ချက်ထည့်သွင်းထားသည်။
ထည့်သွင်းထားသည် ကစားသမားလေယာဉ်မှကျသောအခါအသေးစိတ်, လေထီးနှင့်မြေယာဖွင့်လှစ်။
ထည့်ပါ လျင်မြန်စွာပြောင်းရန် function ကိုအသစ် peepholes အကြား။
3 မြင်ကွင်းဖွင့်လှစ်သည့် mode များထည့်သွင်း: push, push နှင့်ကိုင်, ရောမွှေပါ။
မြင့်မားသောနှင့်အနိမ့်အသံသက်ရောက်မှုများအတွက် settings ကိုတိုးတက်ခဲ့သည်။ ကစားသမားများသည်နောင်လာမည့်ဗားရှင်းများတွင်အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်မှုများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ထည့်သည် ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်၊ရိုက်ချက်ကိုပယ်ဖျက်ပါ၊ ပြန်တင်ပါ၊ အထက်နှင့်အောက်ကိုပစ်ပါ။
ယခုမတ်တပ်ရပ်ခြင်း / ခေါက် / ပစ်၊ သို့မဟုတ် overhead သို့မဟုတ် under ကိုပစ်ခြင်းအကြားပြောင်းလဲနိုင်သည် အဆိုပါလက်ပစ်ဗုံး activated သောအခါ။ ဘေးတိုက်ရပ်နေစဉ်လက်ပစ်ဗုံးများကိုပစ်ချနိုင်သည်။
သက်ရောက်မှုလက်ပစ်ဗုံးယခုတိုးမြှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် "tinnitus" ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (ကြားနာမှု၏ခဏတာဆုံးရှုံးမှု) ။
အ Molotov ကော့တေးများသည်ယခုအခါပိုမိုပျက်စီးစေပါသည် သူတို့ကသစ်သားတံခါးများမှတဆင့်စတင်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုသေနတ်တွေနဲ့ခေါ်နိုင်တယ်။ ပေါက်ကွဲမှုမှမီးသည်သစ်သားတံခါးများမှတစ်ဆင့်ပျံ့နှံ့သွားလိမ့်မည်။
Stun လက်ပစ်ဗုံးယခုပိုကြီးတဲ့တိုကျရိုကျareaရိယာထိမှန်။ အဆိုပါ Whitening သက်ရောက်မှုတိုးတက်ပါပြီ။
အ ကျည်ဆန်များယခုရေကိုဖြတ်သန်းသွား, ဒါပေမယ့်သူတို့ကရေအောက်ပစ်မှတ်မှလျော့နည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလုပ်ပါ။
အ Home Island ရှိမြေပုံအမှတ်အသားများသည်ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ပါ သင်လေယာဉ်ပေါ်ရပြီးနောက်။ ကစားသမားသည်စစ်မြေပြင်တွင်ရွေ့လျားသွားသည်နှင့်အမျှမြေပုံ mini သည်အတိုင်းအတာဖြင့်လှုပ်ရှားလိမ့်မည်။
နောက်ထပ်သတ်ဖြတ်ခြင်းရာဇဝင်ထဲသို့ icon များထည့်ထားသည်။
အဓိကသံလိုက်အိမ်မြှောင်လမ်းညွှန် ၈ ခုသည်ယခုအခါအသိအမှတ်ပြုရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း၊ PUBG Mobile အတွက်သတင်းအပြောင်းအလဲ ၁၀၀ ကျော်နှင့်သတင်းများ အရာလာမည့်သီတင်းပတ်အတွင်းရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မွမ်းမံချက်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာကိုအာရုံစိုက်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Halloween အတွက် PUBG Mobile သို့ပြောင်းလဲမှုအသစ်များနှင့်အသစ် ၁၀၀+
Xiaomi Mi MIX 2S သည် Android Pie သို့အဆင့်မြှင့်တင်တော့မည်ဖြစ်သည်